Tag: nnukwu data | Martech Zone
Tag: nnukwu data
Tuzdee, Machị 29, 2022 Tuzdee, Machị 29, 2022 Douglas Karr
Ruo ọtụtụ iri afọ, mgbasa ozi na ịntanetị adịchaghị iche. Ndị nkwusa họọrọ ịnye ndị mgbasa ozi ebe mgbasa ozi nke ha ozugbo ma ọ bụ tinye ụlọ mgbasa ozi maka ebe mgbasa ozi ka ha kwuo na zụta ha. Gbanye Martech Zone, anyị na-eji anyị ad ezigbo ala na ụlọ dị ka nke a… tinye n'ọrụ Google Adsense ka monetize isiokwu na peeji nke na mkpa mgbasa ozi nakwa dị ka inserting kpọmkwem njikọ na ngosi mgbasa ozi na mmekọ na nkwado. Ndị mgbasa ozi na-eji aka jikwaa
Usoro MarTech nke na-ebugharị mgbanwe dijitalụ
Fraịde, Ọktọba 22, 2021 Fraịde, Ọktọba 22, 2021 Pavel Obod
Ọtụtụ ndị ọkachamara n'ịzụ ahịa maara: n'ime afọ iri gara aga, teknụzụ ahịa (Martech) agbawala na-eto eto. Usoro uto a agaghị adalata. N'ezie, ọmụmụ 2020 kachasị ọhụrụ na-egosi na enwere ihe karịrị 8000 teknụzụ ahịa n'ahịa. Ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-eji ihe karịrị ngwá ọrụ ise n'otu ụbọchị, na ihe karịrị 20 n'ozuzu na mmezu nke atụmatụ ahịa ha. nyiwe Martech na-enyere azụmahịa gị aka ịkwụghachi ego na enyemaka
Amamịghe echiche (AI) na mgbanwe mgbanwe ahịa dijitalụ
Na Tọzdee, Septemba 28, 2021 Na Tọzdee, Septemba 28, 2021 Isaja Karadovska
Ahịa dijitalụ bụ isi ahịa azụmaahịa ọ bụla. A na -eji ya ebubata ahịa, nwekwuo mmata akara, wee rute ndị ahịa ọhụrụ. Agbanyeghị, ahịa nke oge a juru eju, na azụmaahịa ecommerce ga -agbasi mbọ ike iji merie asọmpi ahụ. Ọ bụghị naanị nke ahụ - ha kwesịkwara ịdebe usoro teknụzụ ọgbara ọhụrụ ma mejuputa usoro ịzụ ahịa dịka o siri dị. Otu n'ime ihe ọhụrụ teknụzụ ọhụrụ nwere ike gbanwee ahịa dijitalụ bụ ọgụgụ isi (AI). Ka anyị hụ otú. Okwu Ndị Dị Oké Mkpa na Taa
Akụkụ: Na-anakọta ma Jikọọ Data Ndị Ahịa Site na API echekwara na SDKs
Onye ahịa anyị na-arụ ọrụ n'oge na-adịbeghị anya nwere ụkpụrụ ụlọ siri ike nke jikọtara ọnụ na ikpo okwu iri na abụọ ma ọ bụ karịa ebe ntinye. Nsonaazụ bụ ọtụtụ mbiputegharị, nsogbu ogo data, yana nsogbu na ijikwa mmejuputa ọzọ. Ọ bụ ezie na ha chọrọ ka anyị tinyekwuo na ya, anyị tụrụ aro ka ha chọpụta ma mejuputa Platform Ahịa nke Ndị Ahịa (CDP) iji jikwaa ebe ntinye data niile n'ime sistemụ ha, melite data ha ziri ezi, rube isi